» सपना र विजयसँग बालचन्द्र र शोभाको कडा दोहोरी भिडन्त
सपना र विजयसँग बालचन्द्र र शोभाको कडा दोहोरी भिडन्त
२२ भाद्र २०७८, मंगलवार १७:४०
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २२ भदौ । नेपालकै पहिलो दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ मा उत्कृष्ट ८ को दोहोरी भिडन्त सुरु भइसकेको छ । दोहोरी च्याम्पियनले यसअघि नै उत्कृष्ट ८ छनौटपछि कुन कुन समूहको बिचमा दोहोरी भिडन्त हुनेछ भनेर तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जस अनुसार उत्कृष्ट १६ मा परेका ८ समूहको भिडन्तमा जुन जुन जोडी समूह विजेता हुन्छन् उनीहरुको बिचमा नै दोहोरी भिडन्त हुने तय भएको थियो । यस अनुसार चौथो हप्तामा उत्कृष्ट ८ मा परेका सपना रोका र विजय बानियाँसँग बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीको कडा दोहोरी भिडन्त हुनेछ । यस भिडियो सामग्रीमा दोहोरी च्याम्पियनका उत्कृष्ट ८ मा हुने यी दुबै जोडीहरुको दोहोरी भिडन्तका बारेमा छोटो चर्चा गर्दैछौँ ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ छनौटपछिको चौथो दोहोरी सपना रोका र विजय बानियाँसँग बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीले दोहोरी भिड्दैछन् । यी दुबै टिमले यसअघिको दोहोरी भिडन्तहरुमा दर्शक र निर्णायकहरुबाट प्रशंसा पाएका थिए । उत्कृष्ट ८ को दोस्रो दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुको प्रस्तुति पश्चात दर्शक भोटको आधारमा रिजल्ट हुनेछ । यी दुबै जोडीहरु गायक गायिकाकै रुपमा चिनिएका र लाईभ दोहोरीमा दर्शकहरुको मन जित्न सफल जोडीहरु हुन् । दुबै टिम बलियो भएकोले एकअर्कालाई पछि पार्न यो जोडीहरुले दमदार दोहोरी भिडन्त गर्नेछन् । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ४ अर्थात सेमिफाईनलमा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका सातौँ जोडी हुन् विजय बानियाँ र सपना रोका । उत्कृष्ट १६ मा उनीहरुले चर्चित जोडी बिमाकुमारी अनुरागी र सुरेन्द्र मगरसँग दोहोरी भिडेका थिए । दोहोरी भिडन्तमा सपनालाई दुई निर्णायकले फो स्टार र अर्का दुई निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । विजयलाई एक जना निर्णायकले फो स्टार र बाँकी ३ जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । उनीहरु निर्णायक मत र दर्शक भोटका आधारमा उत्कृष्ट ८ मा पुगेका हुन् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका सातौँ जोडी हुन् सपना रोका र विजय बानियाँ ।.यसअघि उत्कृष्ट २४ को क्रममा उनीहरुले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५६९.५ अंक प्राप्त गर्दै ९.५ अंकको अन्तरमा जीत हासिल गरेका थिए । फिजिकल अडिसनदेखि नै मिलेको जोडीका रुपमा चर्चामा आएका विजय र सपना गायक गायिकाकै रुपमा परिचय बनाईसकेका प्रतियोगीहरु हुन् । उनीहरु लाईभ दोहोरीमा चर्चित छन् । गायिका सपना रोक्का स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ निवासी हुन् । हाल काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेकी सपनाले पोखराबाट प्लस टु सकाएर काठमाडौमा आएपछि गायन क्षेत्रमा आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी हुन् । सानैदेखि मामाघरमै बसेर हुर्किएकी सपनाले संघर्षकैबिच दोहोरी गाउन सिकेकी थिईन् । उनले विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा पनि सहभागी भएर जित हासिल गरेकी छिन् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका आठौँ जोडी हुन् बालचन्द्र बराल र शोभा कार्की । उत्कृष्ट १६ मा उनीहरुले चर्चित जोडी चिज गुरुङ र देवी आलेसँग दोहोरी भिडेका थिए । दोहोरी भिडन्तमा बालचन्द्रले सबै निर्णायकहरुबाट फो स्टार प्राप्त गरेका थिए भने शोभाले दुई जना निर्णायकबाट फो स्टार र दुई जनाबाट थ्री स्टार प्राप्त गरेका थिए ।